Indlu yaseBay Beach-Dalgety Bay - I-Airbnb
Indlu yaseBay Beach-Dalgety Bay
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJak And Kerri
UJak And Kerri yi-Superhost
Iflethi yolwandle, kufutshane nesikhululo sikaloliwe-imizuzu engama-25 kaloliwe okanye uhambo lwemoto ukuya e-Edinburgh. Iihambo ezithandekayo zonxweme ezineembono ezintle. Imizuzu engama-25 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Uthungelwano lomjikelo omkhulu ngqo phambi kweflethi. Ukuhamba okugqwesileyo kunye nendawo esembindini yokuhlola iSkotlani ngeentaba kwiyure nje enye!
Umgangatho wethu wokuqala unendawo entle yokuhlala kwindawo entle. Isikhululo sikaloliwe sikumayile enye onokuthi uhambe uye kuyo ngemizuzu eyi-15 okanye uqhube ngemizuzu embalwa. Oololiwe abaya e-Edinburgh babaleka rhoqo ngemizuzu engama-30 kwaye uhambo luthatha imizuzu engama-25 ukuya eHaymarket kunye nemizuzu engama-30 ukuya kwisikhululo saseWaverley.
Ukuba ufika kwisikhululo seenqwelomoya sase-Edinburgh emini ungabamba itram eya e-Edinburgh Gateway emva koko ubambe uloliwe oya eDalgety Bay.
Kukho iihambo ezintle zonxweme ezineembono ezimangalisayo ngqo phambi kweflethi yethu kunye neendawo zokutyela ezimbini / iibhari eDalgety Bay ezinokutya okukhulu neziselo. I-Aberdour ekufutshane ikwabonelela ngeendawo zokutyela ezintle kakhulu, iigadi, iilwandle eziphumelele ibhaso kunye nenqaba.
Ingalungela iindwendwe ezijonge ukufikelela kuMnyhadala wase-Edinburgh okanye nje ikhefu elinoxolo kude nokuphithizela.
Kukho uhambo oluselunxwemeni kunye nothungelwano lwebhayisekile kumnyango wethu, kunye nendawo yokwenza umthambo kunye nezinto eziluncedo zalapha ekhaya umgama nje ohamba imizuzu emihlanu kubandakanya i-Co-Op, ukutya kwe-MS @ BP kunye neqela lezinto ezithathwayo zasekhaya. Unokuhamba uye kwiibhari ezithandekayo / zokutyela eBay ukuba ufuna ukonwabela urhatya ngaphandle kokungena kwisixeko sase-Edinburgh.
Zininzi iilali ezibukekayo eziselunxwemeni ezinokufikelelwa ngemoto, ezinje ngeAberdour, Culross, Anstruther kunye neCrail. Okanye mhlawumbi unqwenela umjikelo wegalufa phezulu eSt. Andrews okukuhambo lwemizuzu engama-45 ukuya emantla.
Umbuki zindwendwe ngu- Jak And Kerri
Siza kufumaneka ukuze sikuncede ngayo nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho. Sinokuqhagamshelwa ngefowuni okanye nge-AirBnB app.
Iilwimi: 中文 (简体), English, हिन्दी, 日本語, ਪੰਜਾਬੀ, Español